Apple waxay iibsatay laba xarumood oo cusub oo ku yaal Cupertino | Wararka IPhone
Xarumaha Apple ay si rasmi ah u furatay dhowr bilood ka hor waxay leeyihiin qol kayar 15.000 oo shaqaale ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa inaysan ku filneyn inay la qabsadaan dhammaan wixii Apple ku faafay agagaarka Cupertino, sidaas darteed waxay hadda iibsatay laba dhisme oo xafiis si ay u ballaariso sidoo kale, si kadis ah, joogitaankeeda aagga Bay Bay.
Sida laga soo xigtay The Mercury News, Apple waxay iibsatay laba dhisme xafiis oo ku yaal geeska Stevens Creek Boulevard iyo Torre Avenue. Lacagta ay bixisay shirkadu waxay gaareysaa 290 milyan oo doollar waana hore u jireen Kirishtaan Cupertino City 1 iyo Cupertino City 2.
Dhismaha koowaad, Cupertino City 1, wuxuu leeyahay 15.600 mitir murabac, halka kan labaad, Cupertino City 2, uu dhererkiisu yahay 13.500 mitir murabac ah. Sanadihii la soo dhaafay, Apple waxay iibsaneysay waxyaabo kala duwan meelaha xafiisyada ee magaalooyinka ku hareeraysan Sunnyvale iyo San Jose si ay u dejiyaan shaqaale badan.
Bilihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida Apple waxay diirada saareysaa adeegyada, qalabka dhinac, maxaa yeelay iibinta iPhone-ka ma ahan sidii ay ahaayeen dhowr sano ka hor. Tani waxay u baahan tahay shaqaale dheeri ah iyo tas-hiilaad cusub si ay u dejiso shaqaalaha ay Apple u kireysaneyso adeegyadeeda kala duwan ee cusub.
Adeegyo, adeegyo iyo adeegyo badan
Kaadhka Apple ayaa hadda si rasmi ah looga heli karaa dalka Maraykanka, xilliganna ma ogin goorta uu iman doono dalal kale, in kasta oo wararka qaar ay sheegayaan in ay dhowaan dhici karto. Bilaha soo socda, Apple Arcade iyo Apple TV + waxay bilaabi doonaan safarkooda, qiimahoodu waa 4,99 iyo 9,99 euro siday u kala horreeyaan, in kastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin.
Waxay u badan tahay in bisha soo socota ee Sebtember 10, taariikhda loo qorsheeyay soo bandhigida iPhone 11 iyo Apple Watch Series 5, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino csi rasmi ah u xaqiijiso taariikhda la siidaynayo iyo qiimaha labadaba Apple Arcade iyo Apple TV +.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay iibsatay laba xarumood oo cusub oo ku yaal Cupertino
Adobe wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee Photoshop-ka iPad-ka